Ogolaanshaha Jaamacada Hodges »Loogu Talo Galay Dadka Waaweyn ee Shaqeeya
Waa Kaliya Bilawga Sheekadaada
Waxaan Caawinay Ardayda
Sida Aad U Hesho Riyooyinkooda
In ka badan 30 Sano!
30kii Sano ee U Danbeeyay
Mas'uul ka noqo mustaqbalkaaga maanta!
Muxuu Noqon doonaa Sheekadaada #Hodgesod
Macluumaadka Kala Duwan
Darajooyinka khadka tooska ah
La kulan Dr. John Meyer, Guddoomiyaha Jaamacadda Hodges iyo Shahaadada Labaad ee Hodges
# MyHodgesStory waxay u badan tahay inay leedahay cutubyo badan oo isku mid ah oo kuwaaga sameeya. Waxaan bilaabay shaqadayda makaanikada baabuurta iyo milkiilaha ganacsiga. Ku dhowaad 20 sano ka dib, waxaan go'aansaday inay ahayd waqtigii isbeddel. Aniga iyo qoyskaygu waxaan u guurnay Florida, dhiirrigelintoodana, waxaan safarkayga ka bilaabay Hodges (ka dibna International College), waxaanan ku qalin jabiyay labada darajo ee Bachelor iyo Master. Shaqeynta iyo taageerida qoys, marka lagu daro galaaska fasalka waxay qaadataa is-edbin badan, laakiin waan ogaa in ugu dambeyn dhammaantood ay mudan yihiin.
Ka Madaxweyne ahaan, maalinta aan ugu jeclahay waa qalin-jabinta. Waa wax lagu farxo inaad aragto xiisaha wejigeenna qalin-jabiyaha ah markay wajiga ka gudbayaan. In ka badan 10,000 oo arday ayaa u dabaaldegay qalinjabinta 30-kii sano ee la soo dhaafay. Laakiin sida ugu wanaagsan maalinta qalin jebintu waa, ujeeddada macallimiinteenna iyo hawlwadeennada Jaamacadda Hodges waa inaan u diyaarinno ardaydeena, ma ahan oo keliya kan ugu horreeya, laakiin dhammaan maalmaha qalin-jabinta ka dib.
Jaamacadda Hodges runtii waa meel gaar ah oo ay ardaydeena ku gaari karaan himilooyinkooda waxbarasho iyo xirfadeed. Waa meesha aad ka “Ku Dhawaaw oo Fog."
Hodges U Darajo # 2! - 2021 Kulliyadaha ugu Fiican Florida ee Dhibcaha Mushaharka
Bachelor Degree Center: 10 Bachelor-ka Intarnet-ka ee Intarnetka badan ee la awoodi karo ee Naqshadeynta Sawirka ee 2020
Kulliyadaha ugu Fiican: 2020 Kulliyadaha ugu Fiican ee Ku yaal Florida
Iskuulada ugu Fiican: 25-ka Bachelor-ka Ugu Fiican ee Internet-ka ee Barnaamijyada Dambiyada Internetka
Faallooyinka Kulliyadda ugu Fiican: Top 25 Barnaamijyada Bachelor-ka Online-ka ee Naqshadeynta Sawirka
Iskuulada ugu Fiican: Darajooyinka injineernimada softiweerka ee ugufiican ee Online-ka 2020
Iskuulka ugu Fiican Dugsi-xumada: 10-ka Barnaamij ee Heerka Sare ee Shahaadooyinka Sharci-yaqaanada Ugu Fiican
Internetka U: 2019 Kulliyadaha Intarneedka ee La Awoodi Karo Darajooyinka Sharciga
Kooxda Waxbarashada SR: 2020 Kulliyadaha ugu Fiican ee Ku yaal Florida
Barnaamijyada Kaliya ee Khadka Tooska ah
Maxaa Hodges Ka Dhigaa
Jaamacadda Hodges, Waxay diiradda saartay Waxaad. Barnaamij kasta oo shahaado ah, hab waxbarasho kasta, borofisar kasta, iyo xubin kasta oo kooxda ka tirsan. Waxaan u heellan nahay kugu dhiirrigelinaya si loo gaadho waxbarashadii aad uqalantay nolosha iyo shaqada aad rabto.
Manhajka loogu talagalay inuu kuu diyaariyo inaad ku bilowdo xirfaddaada Maalinta Kowaad!
Aqoonsiga 5 Kala Duwan Ururada Aqoonsiga.
Magacaabista Hay'adda Adeegyada Isbaanishka by ay Ururka Isbaanishka ee Kulliyadaha iyo Jaamacadaha - Hablamos Español
Jaamacadda Hodges Natiijooyinka Shaqada Heerka Guusha waa 93%.
Loogu magac daray “40 Kulliyadood ee ugu Fiican Florida".
Ciidan / Halyeey Saaxiibtinimo Xarumaha leh Xarumaha Xannaanada Vetka.
magacaabay Waqtiga Milatariga Ugu Fiican 2018-2020.
Jaamacadda aan macaash doonka ahayn.
Bishiiba Course Start Taariikhaha.
Loogu qiimeeyay a Dugsiga Sare ee Nabdoon.
Xarumaha jimicsiga labadaba Naples iyo Fort Myers
Hal Fasal Bishiiba Foomka Focus Focus halka loo oggol yahay Isqorista Buuxda ama Mid-dhiman ah
Shahaadooyinka gundhigga ah gudaha Barnaamijyada Fasalka
30 Years U adeegida Tacliinta Sare ardayda
Fasallada la bixiyo Online, Xerada-xerada, Isku duubay, ama TEC qaababka. Fasallada TEC waxay kuu oggolaanayaan xorriyadda aad fasallada qaarkood toos uga qaadan karto meel kasta oo adduunka ah.
Noqo A #HodgesHero
U Bedela Dunida Jiilalka Soo Socda
Barnaamijyada Daryeelka Caafimaadka Sare
Ka Mid Ah Kuwa Ugu Wanaagsan!
Meelaynta Shaqada Guriga ee Malaayiinta Milyan ah
Michelle Spitzer shaqadii guriga ee ugu horreysay ee loo qabtay Hodges waxay ahayd qorshe ganacsi oo horseeday a malaayiin doolar fikrad ganacsi! Maxaad adiga #Qisooyinkayga noqon?
Arday kasta oo waligii su'aal ka keenay wax ku oolnimada shaqooyinka fasalka waligiis lama kulmin Michelle Spitzer.
Laga bilaabo mashruuc fasal fudud, Spitzer waxay qaadatay qorshe ganacsi oo la diyaariyay bilowgii waxbarashadeeda jaamacada Hodges oo loo badalay xayeysiinta ugu badan ee MaidPro dalka gudihiisa.
Mid iyada ka mid ah maareynta ganacsiga barafasoorradu xitaa waxay noqdeen lataliyeheeda, iyagoo siiya taageero tacliimeed iyo anshax maadaama Spitzer ay ka shaqeysay inay dhammaystirto waxbarashadeeda isla mar ahaantaasna ay bilowdo ganacsi u gaar ah.
Haddii ay si toos ah ula hadli karto arday aan hubin ku raadinta tacliinta sare? "Noloshaada ku badal adiga oo naftaada maalgashada," ayay tiri. "Waad u qalantaa!"
Hodges 'Barnaamijyada Dalbashada
Ku Bilow Sheekadaada # MyHodges Maanta
Taariikhda Bilowga Muddada Xiga
Kalfadhiga Macluumaadka PTA
Qaad tallaabada ugu horreysa ee xirfad caafimaad oo abaalmarin leh Kaaliyaha Daaweynta Jirka Wax ka baro sida aad uga bilaabi karto Jaamacadda Hodges's CAPTE barnaamijka Kaaliyaha Daaweynta Jirka ee la aqoonsan yahay maanta. Xiisaynaya noqoshada a
4:30 pm - 5: 30pm
Ficil ahaan iyo 4501 Gumeysiga Blvd, Dhismaha U, Qolka U361 Fort Myers, Florida 33966, Qolka U361
Bachelor of Science in Nursing (BSN) Kalfadhiyada Macluumaadka
Bachelor of Science in Nursing (BSN) Kulamada Macluumaadka Ku soo biir safka halyeeyada Hodges! Jaamacadda Hodges's Bachelor of Science in Nursing (BSN) barnaamijka waxay siisaa fursad waxbarasho oo aad u wanaagsan ardayda wax barta iyo farsamo shaqsiyeed personal
5:30 pm - 6: 30pm
Dhisida U qolka 209 ama Virtual
Ka Maqal Hodges U Ardayda
Hodges waa waayo-aragnimo weyn. Dib uma dhigi kartid. Waxaad u hibeysay, jeceshahay, iyo macallimiin daacad ah kuwaas oo wax walba u hura. Deegaanka waxbarashadu waa mid cajiib ah. Waxaad dareemeysaa soo dhaweyn oo aad rabto inaad waxbarto. Waxbarashadu qasab kuma ahan qof walbana waa la jecel yahay. Macallimiintu waxay kugula dhegan yihiin wanaagga iyo xumaanta waxayna ku ogeysiinayaan inaad qof tahay. Waa dadaal kooxeed iyo nidaam taageero weyn sanadka oo dhan. Hodges wuxuu i baray inaan noqdo qof dhiiranaan badan oo aan u huro wixii aan sameeyo.
Waan ku riyaaqay dhinaca internetka. Waxay ii suurta galisay inaan aado iskuulka aniga oo shaqeeya waqti buuxa oo aan ahay hooyo kaligeed ah. Culeyska shaqadu wuxuu ahaa mid la maareynkaro oo borofisarradu waxay ahaayeen kuwo cajiib ah. Xaqiiqdii waxaan kula talin lahaa jaamacada Hodges kuwa kale.
Jaamacadda Hodge waxay noqotay iskuul layaableh oo la dhigto. Waxaan ka qaatay fasalo waqti-buuxa ilaa waqti-dhiman, gadaal iyo gadaalna u rogaya shantii sano ee la soo dhaafay, halka aan ku shaqeynayo xirfad waqti-buuxa ah. Intii aan raadinayey fasalo aan ka qayb galo oo aan ku wareero fasallada ku habboon shahaadadayda, waxaan la kulmay shaqaale Hodges ah oo hawsha u fududeeyey oo aan xanuun lahayn. Mrs. Jeanette Colon waxay ahayd ilaah aamin. Had iyo jeer waxay sameysaa waqti si ay i caawiso, waxay uga jawaabtaa su'aalaha, waxayna hubisaa inay wax ku qabsoomaan waqti ku habboon. U heellanaanta shaqadeeda waa mid la yaab leh oo siyaabooyinkeeda xiisaha leh ayaa iga caawiya inaan sii wado riixitaanka. Xitaa waxaan tixgeliyey dhammaystirka Shahaadada Master-ka maxaa yeelay way dhiirrigelin badan tahay. Waad ku mahadsantahay haysashada marwo Colon xubin shaqaale ah. Aad iyo aad ayaan u bogaadinayaa iyada iyo shaqadeeda adag.